အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက စားအုန်းဆီတင်ပို့မှု တားမြစ်ချက် ရုပ်သိမ်းမည် - Xinhua News Agency
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ် Bogor မြို့ရှိ စိုက်ပျိုးရေးခြံတစ်ခြံတွင် ထရပ်ကားတစ်စီးပေါ်သို့ ဆီအုန်းများတင်နေသော အလုပ်သမားများအား ဧပြီ ၂၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဂျကာတာ၊ မေ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ပြည်တွင်း၌ ဟင်းချက်ဆီဈေးနှုန်းများနှင့် ရောင်းလိုအားကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သဖြင့် စားအုန်းဆီ၊ ဟင်းချက်ဆီ၊ သန့်စင်၍ အရောင်ချွတ်ပြီး အနံ့ကင်းသော (RBD) စားအုန်းဆီနှင့် RBD palm olein ဆီများ ပြည်ပတင်ပို့မှု တားမြစ်ချက်အား မေ ၂၃ ရက်မှစတင်၍ ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ် Bogor မြို့ရှိ ဈေးတစ်နေရာတွင် ဟင်းချက်ဆီများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးလုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်သမားတစ်ဦးအား မေ ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ဟင်းချက်ဆီရောင်းလိုအားမှာ ၂၁၁,၀၀၀ တန်အထိ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ကာ ဧပြီ ၂၈ ရက် တားမြစ်ချက်များမသတ်မှတ်မီက ဆီတန်ချိန် ၆၄,၀၀၀ ထက် မြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုက မေ ၁၉ ရက် အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
“အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတစ်ဝန်း လိုအပ်တာထက် (ရောင်းလိုအား) က ပိုများလာပါပြီ” ဟု ဝီဒိုဒိုက ဆိုသည်။
စားအုန်းဆီ ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်တားမြစ်ချက်ကို ရုပ်သိမ်းရေး ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးသူများနှင့် စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်သူများက ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုနှင့် လတ်ဆတ်သော ဆီအုန်းအခိုင်များ များပြားနေသဖြင့် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Sri Mulyani Indrawati က ပြည်ပတင်ပို့မှုတားမြစ်ချက်ကြောင့် နိုင်ငံ၏ ဝင်ငွေ အင်ဒိုနီးရှားရူပီရားငွေ ၆ ထရီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၇.၃၃ သန်း) လျော့ကျသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သီးခြားပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-05-20 09:34:19
JAKARTA, May 20 (Xinhua) — Indonesia will lift an export ban on crude palm oil, cooking oil, refined, bleached and deodorized (RBD) palm oil, and RBD palm olein starting May 23, as the country has brought domestic cooking oil prices and supply under control.
Indonesian President Joko Widodo said atavirtual press briefing on Thursday that the cooking oil supply in the local market has reached 211,000 tons, far higher than 64,000 tons the country had before the ban was imposed on April 28.
“Now we already have more (supply) than we need nationally,” Widodo said.
The decision to lift the export ban came after protests from palm oil farmers and producers as they suffered declining prices and oversupply in fresh fruit bunches.
Separately, Indonesian Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said the export ban has been estimated to reduce the country’s revenue by6trillion rupiahs (407.33 million U.S. dollars). ■
Photo 1 : Workers load palm fruits intoatruck ataplantation in Bogor, West Java, Indonesia, on April 26, 2022.(Xinhua/Veri Sanovri)
Photo2: A worker processes cooking oil for distribution atatraditional market in Bogor, West Java, Indonesia, May 17, 2022. (Photo by Sandika Fadilah/Xinhua)